आमा ! (आमा सम्बन्धि मनछुने लाइनहरु; एकपटक अवश्य पढ्नुहोला) – Safalata Post
आमा ! (आमा सम्बन्धि मनछुने लाइनहरु; एकपटक अवश्य पढ्नुहोला)
मान्छेको शरीरले केवल 45del युनिट सम्म मात्र दर्द सहन सक्छ, तर सन्तानलाई जन्म दिने समयमा एउटी आमालाई 57del युनिटसम्मको दर्द हुन्छ । यो बीस हड्डीहरु एकैसाथ टुट्नु बराबर हो । जसले तपाइको लागि यति “दर्द” सहेको छ, उनको दिल मा कहिल्यै “दर्द” नदिनु ।
ईश्वर पनि अवस्य आमा जस्तै देखिनुहुन्छ होला ।
आमा को लागि के लेख्नु, आमाले आफै मलाई लेखेकी छिन ।
आमा र क्षमा दुबै एउटै हो किनकी माफ गर्नमा दुवै राम्रा छन ।
कुनै यस्तो काम गर्नुस कि तपाइको आमा- बुवाले आफ्नो प्रार्थना मा भनुन कि – हे ! प्रभु मलाई हरेक जन्ममा यस्तै संतान दिनु ।
मलाई मेरी आमाले एउटै कुरा सिकाएकी छिन, छोरा ! कसैले हातबाट खोसेर लानसक्छ तर नसिबबाट होइन ।
हरेक मान्छेले आफुले चाहेको चिजलाई मन पराउछन, श्रीमतिलाई माया गर्दछ तर आमालाई पुज्दछ । आमा ! म पनि तिमी जस्तै राम्रो र सच्चा बन्नेछु ! म वादा गर्छु ।
आमा जब तिम्रो आशीर्वाद ले काम गर्छ, तब बाटोको मुश्किकहरु ले नै सलाम गर्छ ।
यी लाइनहरुले छुनसक्छ तपाइको मन [पहिलो खण्ड]